Dagaal ka dhacay Muqdisho iyo Alshabaab o sheegtay Hub ay ka qabsatay Amisom – SBC
Dagaal ka dhacay Muqdisho iyo Alshabaab o sheegtay Hub ay ka qabsatay Amisom
Posted by Webmaster on October 22, 2011 Comments
Markale maanta magaalada Muqdisho Xarunta dalka Soomaaliya gaar ahan degmada Deyniile oo ka tirsan gobolka Banaadir waxaa ka dhacay dagaal xoogleh oo ay isga hor yimadeen ciidamada Dowlada KMG ah ee Soomaaliya oo ay bar bar socdaan kuwa Amisom iyo weliba xarakada Shabaab Almujahidiin.
Dagaalkan ayaa ah mid ay ku soo rogaal celiyeen Xarakada Alshabaab degmadaasi Deyniile, waxaana soconaya dagaal xoogleh oo marrarka qaar uu u egyahay mid hakad galaya.
Xarakada Alshabaab Almujaahidiin ayaa iyaga dhankooda guulo ka sheegtay dagaalada Maanta waxaana ay sheegeen in ciidan farabadan ay ka dileen Amisom islamarkaana ay ka qabsadeen hub iyo gaari nooca Suuga loo yaqaan.
Dhinaca kale Dowlada KMG ah ayaa iyana dhankeeda ku adkeysanaysa in degmada Deyniile ay gacan ku heynteeda si buuxda u heyso .
Dagaalada ka dhacaya Degmada Dayniile ayaa noqday kuwo soo laalaabta waxaana ay aheyd markii habeen nimadii xalay halkaasi laga maqlayay daryanka madaafiicda cul culus iyo rasaas la is weydaarsanayo.
Ilaa iyo iminka lama xaqiijin karo khasaaraha dhabta ah ee halkaasi ka jira madaama dagaaladu ay soo laalaabanayaan marka laga reebo sheegashada ciidamada DKMG in ay gacanta ku hayaan Deyniile iyo xarakada Alshabaab oo sheegtay in askar tiro badan ay ka dishay Amisom.